China Flat Pasi & Simuka Bhegi fekitori uye vagadziri | Hong Bang
Kubatanidza akanakisa maficha eQuad Seal uye Simuka Homwe, Iyo Flat Pazasi Bhegi (inozivikanwawo seBhokisi Homwe) ine yakakwira shefu kukwirira, uku ichiwedzera zvese masherufu uye kurongedza nzvimbo nekatoni-dhizaini yakadzika pasi gusset. Flat Pazasi Mabhegi anotendera nyore kumusoro kuzadza uye inokodzera dzakasiyana siyana musika kunyorera, kubva kugungwa, kofi, uye muesli, kuburikidza nekudya kwechipfuwo uye zvigadzirwa zvekurima.
Zvimiro zveFlat Pazasi & Simuka Bhegi
Yakasimba yakasimba lamination inopa yakaenzana kuomarara kune yakakwana yekuzvimiririra kugona.
Iyo yakawanda gussets inobvumidza yakawedzera yekumaka uye dhizaini nzvimbo.
Bhokisi-senge chimiro rinopa yakakwira nzvimbo mashandisiro, zvese pasherufu uye mukutakura.
Inogona kusanganisira akasiyana akasarudzika maficha, akadai anodzoreredzwa epamberi zipi, spouts, nyore-kubvarura notches, laser yekukora etc.zvakakwana kune akasiyana siyana akaoma, firiji uye firiji zvigadzirwa
Zvivakwa zveiyo Flat Pazasi Bhegi
Bhegi repasi rakadzika rakagadzirwa kubva pamatanho akati wandei ezvipingamupinyi zvinhu zvinogona kuiswa mumapoka makuru matatu, ayo anouya pamwechete kupa homwe yacho hunhu uye hunogadzikana husingagone. Aya mapoka matatu ndeaya:
Rukoko rwekunze: Inotendera kudhinda kwemifananidzo kuti kuitike, kutakura kushambadzira uko kunotaurisa meseji meseji uye kunofadza kune vatengi.
Middle rukoko: Inoshanda sedziviriro yekudzivirira kuve nechokwadi chekuti zvemukati mehomwe zvinochengetedzwa zvakachengeteka uye nyowani.
Rwomukati: Iyo yakakosha chikamu pakati pevatatu. Iyi dura inowanzo goneswa neFDA kuti ive nechokwadi chekuti chikafu chakachengeteka kana uchinge wasangana nekavha. Izvo zvakare kupisa-kunovharika kuvimbisa vatengi kuti homwe haina kukanganiswa nayo.
Chikafu chePetro Simuka Homwe inobvumidzawo zvigadzirisike maficha senge zipi, maburi epamusoro, kubvarura notches uye hwindo kusimudzira mashandiro ayo.
Kuchengetedza uye mhando yepamusoro
chichava chirevo chedu chekutanga. Zvese zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa nechikafu chegiredhi zvinhu zvinoreva kuti iyo firimu yatinoshandisa, inki uye mutsara wekugadzira ndeye 100% chengetedzo kune wese mukuru kunyange mwana. Kupfuurirazve, isu tiri vakasimba nehunhu zvinoreva zero zero shiviriro yechero nzira yekukanganisa inoratidza pane yakasimba kuvaka, kumesa mweya uye kudhinda kwakajeka. Kavha isina kusimba uye yakakwana mechi nevatengi kudiwa ichagara iri yedu chinangwa.
Dhizaini uye Yakagadziriswa
Heano HONGBANG Packaging. Isu tinopa akasiyana mabhegi ekupakata mabhegi mhinduro kune zvakasiyana zvinodiwa uye zvinoshandiswa. Tiudze chako chinodiwa tichasangana nemarudzi ese ezvido. Isu hatigadzirire zvigadzirwa uye toedza kukuchaira uchienda kwavari; isu tinoteerera kune zvaunoda uye mainjiniya matsva ayo anozogadzirisa ako ekupaka matambudziko.
SERVICES UYE garandi
Tine nyanzvi timu yebasa revatengi kupindura nekugadzirisa mubvunzo mukati maawa makumi maviri nemana. Nyaya yega yega ichave neyakatarwa munhu kuona dhizaini, huwandu, mhando uye zuva rekutumirwa zvinoenderana nezvinodiwa. Tinoda kupa yakanakisa sevhisi uye kupa zvakanyanya kutsigira kumutengi wedu.
Pashure: Flat pasi bhegi
Zvadaro: Kraft Pepa Flat pasi bhegi
Mhepo Column Bhegi
Kofi Plastic Bhegi
Chikafu Plastiki Bhegi
Kavhara Plastic Bags
Flat pasi bhegi